Konke odinga ukukwazi mayelana nolwandle iTyrrhenian | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Olunye lolwandle oluyingxenye yoLwandle iMedithera yi Ulwandle lwaseTyrrhenian. Lolu lwandle lutholakala ogwini olusentshonalanga ye-Italy futhi lubhekwa njengengxenye yoLwandle iMedithera. Inendawo engamakhilomitha-skwele angama-106.000. Ulwandle oluphakathi komngcele wamanani amapuleti ama-tectonic ne-Eurasia ne-Afrika.
Kule ndatshana sizochaza izici nokubaluleka koLwandle lwaseTyrrhenian.
1 Ubukhulu boLwandle lwaseTyrrhenian
2 Ukubaluleka komlando nokwamanje
3 Ijografi engaphansi kwamanzi oLwandle iTyrrhenian
4 Ukuhlukahluka kwezinto eziphilayo nezinhlobo ezisongelwayo
Ubukhulu boLwandle lwaseTyrrhenian
Njengoba iyingxenye yolwandle olunosayizi omkhulu, ukunciphisa umkhawulo wolwandle akulula kangako. Imingcele ye-Italy empumalanga nezifunda okuyizo ICampania, iCalabria, iTuscany, iBasilicata neLazio. Kubuye kube semngceleni osentshonalanga yiCorsica Islands, okwakuyinsimu yaseFrance. Ulwandle lwaseLigurian luhlangana noLwandle lwaseTyrrhenian ngasekhoneni lasenyakatho-ntshonalanga. Kungumngcele oseningizimu-ntshonalanga ohlangana noLwandle iMedithera.
Indawo eyedlulele ikhombisa ukuthi inokokufaka okumbalwa nemiphumela embalwa. Esinye salezi zitolo yilokho okungena olwandle lwaseLigurian. Eminye emibili iholela oLwandle iMedithera kanti enye iya oLwandle i-Ionia.
Ukubaluleka komlando nokwamanje
Lolu lwandle lubambe iqhaza elibalulekile emasikweni nasemphakathini kuwo wonke umlando. Ikakhulukazi ngokuhweba kwamazwe omhlaba uLwandle lwaseTyrrhenian belusebenza kahle. Lokhu kungenxa yendawo enamasu lapho itholakala khona. Ngenxa yalesi sikhundla, imikhumbi yezentengiselwano ingaxhuma kumazwekazi ahlukahlukene asempumalanga. Yize isikhathi eside lolu lwandle lwathola ukuhweba okukhulu nokugeleza kwamatilosi nemikhumbi yabahwebi, inani lokuhweba okwenzeka kula manzi lancipha ngoba amanzi ayelawulwa abaphangi.
Ngesikhathi sikaNapoleon yadlala indima enkulu njengoba yayisetshenziselwa ukwethula imikhumbi yempi.
Njengamanje ukubaluleka kuyaqhubeka nendima yezohwebo nezokumaka ukumaka umzila owusizo ngakho. Nsuku zonke uLwandle lwaseTyrrhenian luthola inani elikhulu lemikhumbi yokuhweba. Iphinde yaba yindawo edumile yezivakashi njengoba iyikhaya leziqhingi eziningana ngaphakathi kwemingcele yayo namanye amadolobha asogwini. Ezinye zezinto ezithandwa kakhulu oLwandle iTyrrhenian zitholakala eSicily, iziQhingi ze-Aeolian, idolobha lasePalermo nedolobha laseNaples. Izikhungo zabavakashi zaleli dolobha zivakashelwa izinkulungwane minyaka yonke. Kulokhu futhi kwengezwa imboni yezohwebo nezokuvakasha.
Ulwandle iTyrrhenian nalo lubaluleke kakhulu emsebenzini wokudoba. Ukudoba, kanye neminye imisebenzi, yikhona okunikela engxenyeni enkulu yomnotho ozungezile.
Ijografi engaphansi kwamanzi oLwandle iTyrrhenian
Indawo engaphansi kwamanzi yalolu lwandle ihlukaniswe izitsha ezimbili. Ngakolunye uhlangothi sinethafa iMarsili ngakolunye uhlangothi ithafa laseVavilov. Lezi zindishi ezimbili zitholakala ngapha nangapha kwebhuloho elikhulu elibizwa nge-Issel. Lolu lwandle lunokujula okuphezulu okungamamitha ayi-12418. Njengoba itholakala emngceleni wamapuleti amabili ama-tectonic, lo mhlabathi uthinteka kakhulu ngumsebenzi wentaba-mlilo. Ngoba izintaba nezintaba-mlilo eziningana zingaphansi kwamanzi kunalolu lwandle futhi bezisebenza le ndawo ithola ukuheha okukhulu kwabavakashi.
Le ndawo yonke futhi ihlala iziqhingi eziningana, kufaka phakathi i-Aeolian archipelago, i-Ustica kanye neTuscan archipelago. Iziqhingi zokuqala zitholakala enyakatho yeSicily. Isiqhingi esikhulu kunazo zonke endaweni yaseTuscan yi-Elba.
Ukuhlukahluka kwezinto eziphilayo nezinhlobo ezisongelwayo
Izinhlobo eziningi zezitshalo nezilwane zihlala kulolu lwandle. Lezi zinhlobo yizo ezenza imboni yezokudoba ichume. Isibonelo, kunabantu abaningi be-seabass, i-bluefin tuna, i-swordfish ne-grouper. Yonke indawo esenyakatho yolwandle ivikelwe njengendawo yokuhlala yezinhlobo zezilwane ezincelisayo zasolwandle zaseMedithera. Kukhona indawo yolwandle yasolwandle enweba uLwandle lwaseLigurian. Lesi siqiwi sibhekele ukuvikela izinhlobo ezahlukahlukene, kufaka phakathi imikhomo yokushayela indiza ende, imikhomo yesidoda, amahlengethwa asebhodlela nemikhomo.
Njengoba sishilo ngaphambili, uLwandle lwaseTyrrhenian lubaluleke kakhulu emizileni yezohwebo ngaphakathi kwendawo. Ngokusebenza njengomzila, amadolobha amaningana etheku asunguliwe kuwo wonke umngcele. Amanye amadolobha lapho kutholakala khona amachweba abaluleke kakhulu yiSalerno, iPalermo, iBastia neNaples.
Phakathi kwezinsongo zokuthi singathola okujwayelekile kwemvelo yasolwandle esinokudoba ngokweqile. Kungenye yezinsongo zemvelo ezibaluleke kakhulu cishe kuzo zonke izinto eziphilayo zasolwandle emhlabeni. Lolu lwandle lwalungeke lube lincane. Njengoba imboni yezokudoba ikhula ngenxa yokwanda kwesidingo sabathengi, abadobi nakanjani bayalinyusa izinga lokudoba inani elikhulu lezinhlanzi unyaka ngamunye. Lokhu kudoba ngokweqile akunakekelwa esikhathini eside ngenxa yokuthi ukuqina kwesimiso semvelo kunciphile. Ngenxa yalokhu kudotshwa ngokweqile, inani labantu liye lehla kancane kancane.
Ngokulandelayo, ukwakhiwa kokudoba ngokweqile kwabantu balaba bantu zithinta uchungechunge lokudla futhi zinciphise ukudla okutholakala ezilwaneni ezinkulu. Olunye usongo olukhulu empilweni emanzini nasemigqeni yalolu lwandle luvela eNtabeni iMarsili. Lezi zintaba ziyintaba-mlilo engaphansi kwamanzi etholakala ekujuleni kwalolu lwandle. Ososayensi baveze okutholakele okuhle okuthokozisayo okusikhombisa ukuthi izindonga zentaba-mlilo zingadilika zingadala i-tsunami. Uma kwenzeka into engokwemvelo yalesi sibalo esikhulu kangaka kulezi zindawo ezisogwini, kungadala umonakalo kubantu bonke.
Phakathi kokudoba ngokweqile ngamabomu nokudlula Kunamahlengethwa amaningi afayo, imikhomo nokuhlukunyezwa okuhlukaniswa njengengcuphe yokuqothulwa.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoLwandle lwaseTyrrhenian.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ulwandle lwaseTyrrhenian